Taariikhda My Butros » 3 Talooyin inuu Abuuro Best Online Profile Dating
Online Aasaasida profile haasaawe ka noqon kartaa kabixitaanka ah iyo fikrad argagaxsan oo dhan hal mar. Reyn cad ka yimaadaa maleeyeen in laga yaabaa in aad kaliya laga yaabo in la kulanto qof in gaar ah iyada oo loo marayo internet muuqata ee xuduudda-yar. Cabsi ay ka imanaysaa maleeyeen yaabban dhab ahaan waxa aad ku qortid aad profile. Haddii aad sida dadka intooda badan tahay, laga yaabaa inaad rabto in aad horey wakiil ugu fiican naftaada, laakiin waxaad kaliya ma oga sida loo sameeyo in. Naftaada tilmaamaya noqon kartaa sirgaxan oo lagu wareerayo. Inkasta oo laga yaabo in ay u muuqdaan kuwo u yara eg qoraal warqad dabool ah codsi shaqo, xaqiiqdu waa mid wali aad dhab ahaantii isku dayayaan inay soo jiidaan kartida taariikhaha-aan madaxda ka iman kara! Maaddaama ay adag tahay abuurista ah shukaansi profile online, waxaa jira shirkado badan oo run ahaantii ka go'an in ay hal ujeeddo-in qoraalkan profiles shukaansi internet. Nasiib wanaag, waxaa jira habab badan oo aad samayn kartaa adiga kuu gaar ah profile / "aniga igu saabsan" qaybta ka badan jiidanaya, oo aan bixin ah "professional" si uu kuu sameeyo.
U sheeg Stories: Mid ka mid ah talooyin ugu muhiimsan profile-qoraal laga yaabaa in la xasuusto, sheekooyin in aad profile hubaal waa hab la xaqiijiyay oo lagu sawiri dadka ku nool in ay u jecel yihiin inay ugu yaraan heli in ka badan aad ka ogaato. Statements sida "Waan fiican ah, madadaalo, nin adventurous "waa generic oo run ahaantii muujiyay aad u yar oo ku saabsan qof. Si kastaba ha ahaatee, doorashada si ay u bixiyaan rikoor ku kooban si ay u matalaan mid kasta oo ka mid ah sharraxaadaha kuwa ka dhigi doonaa inaad si xoog ah xusuusta oo xiiso leh. (Tusaale ahaan, "Mid ka mid waqti halka miyiga Ghana ..."). Dabcan, waxa weeyi furaha in aad sii sheekooyinka kooban; taas oo keliyana ma hayn doonaan profile si fudud la akhriyi karo, laakiin waxa ay sidoo kale ku siin karaa fursad wanaagsan u topic wada hadal u ah taariikh ("... Sidaas sheegi karaa war dheeraad ah oo ku saabsan waqti in aad ..."). Qaab kale oo ay tan u sameeyaan waa in ay bixiyaan tusaalayaal gaar ah statements generic fudud. Tusaale ahaan, oo wuxuu ku yidhi "midnimada Waan idin feeraha BBQ saxiixa iyo coleslaw ii dhigi karta" waa ka badan xusuusta iyo personable badan oo ku yidhi, "Runti waxaan si ka baxsan kariyo on my sol."
Martiqaad Su'aalo: Dabagal dabiiciga ah A ilaa meesha ugu horeysa, aad u hubiso in aad shukaansi profile bixisaa fursado dadka kale inuu ku waydiiyo su'aalo. Haddii si toos ah u sheegay (sida in, "Dareen oo lacag la'aan ah si ay ii dheeraad ah weydii ku saabsan ...") ama loo idmo xeelad maldahan, profile ah in yeedhi baara faahfaahin gaar ah oo adiga kugu saabsan tusto in aad tahay furan ah, Qofka ugu Yeedha sidoo. In si kale loo dhigo, haddii style in aad profile qoran tahay dhawaaqyada dhammaataan dhamaystiran oo la xiray off, markaas kuwa kale waxa laga yaaba in sida aad u bataan. Hayso fursadaha shukaansi aad u furan oo ay uga dhawaajiyeen sida furan ah, Qofka ugu Yeedha naftaada.
Noqo Honest: Ugu dambeyntii, daacad iska cad waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waayo-aragnimo shukaansi guul, haddii online ama ma. Haddii aad profile waxa ku qoran siyaabo ah in la-buuniyaan waayo-aragnimada ama "khubaro" in loo idmo waa Buunbuuninta of dhab ah, dadka kale u arkaysid aad profile waxaa dhici karto in aad u sheegto si degdeg ah ama waqti dambe. Isgaarsiinta daacad marna waa cagta ah oo wanaagsan si on off bilaabaan. Si kastaba ha ahaatee, taas macnaheedu ma aha in ay tahay lagama maarmaan in aad ku bixiso siidaynta buuxda oo ku saabsan dhammaan aqoonyahano iyo hantida aad online midkood. Tusaale ahaan, inuusan dooneynin inuu daaha ka Shuqulkiinnu hadda ay sabab u tahay cabsi laga qabo in kuwa kale dooni laga yaabaa in aad taariikhda ku fudud ee dakhligaaga waa sabab ansax ah in gobolka kaliya, "In beerta caafimaad ee" halkii "qalliinka lafaha ah" in sharaxaad shakhsi. Xaaladdan, isku day lahayn ayaa loo sameeyaa si qofka aad tahay dhawaaqa "fiican" badan xaqiiqada.